सप्तरंग Archives - Page2of 29 - Naya Patrika
प्रेरक प्रसंग : बालापनको मूल्य
एजेन्सी , ६ जेठ - महान् विचारक कन्फ्युसियस एकपटक आफ्ना शिष्यहरूका साथमा लामो यात्रामा थिए । बाटोमा पर्ने कुनै एक गाउँमा पुगेपछि उनले त्यहाँ बसोवास गर्ने एउटा परिवारका एकजना निकै बुद्धिमान् बालकबारे थाहा पाए । त्यसपछि कन्फ्युसियसले उनीसित भेटघाट गरे । भेटघाटका क्रममा कन्फ्युसियसले ती बालकलाई सोधे— संसारमा मानिसहरूबीच निकै असमानता र भेदभाव छ । यसलाई हामी कसरी हटाउन...
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, ५ जेठ - प्रस्तोता समाज नेपालले नयाँ पत्रिकाकर्मी कृष्ण कट्टेललाई सम्मान गरेको छ । नयाँ प्रकाशन प्रा.लि. अन्तर्गत विगतमा गज्जब साप्ताहिक र हाल नयाँ पत्रिका दैनिकमा रहेर संगितक्षेत्रको रोयल्टी संकलन र व्यवस्थापनबारे उत्कृष्ट रिपोर्टिङ गरेको भन्दै समाजले नयाँ पत्रिकाकर्मी कट्टेललाई सम्मान गरेको हो । शनिबार राजधानीमा आयोजित समाजको आठौँ बार्षिक साधारणसभा तथा रोयल्टी...
ज्याकलिनको पोल डान्स हिट
एजेन्सी , ५ जेठ - सलमान खान अभिनीत ‘रेस–३’ फिल्मको ट्रेलर अहिले चर्चामा छ । केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको ट्रेलर र हिरिये बोलको गीतले पनि अहिले दर्शकको मन जितिरहेको छ । हिरिये बोलको सो गीतमा सलमान र ज्याक्लिन जमेर नाचेका छन् । सो गीतमा ज्याकलिनले गरेको पोल डान्सले अहिले तारिफ पाइरहेको छ । ज्याकलिनको त्यो पोल डान्स सुटिङकै क्रममा...
रणवीर र आलियाको प्रेम कति चल्ला ?
एजेन्सी , ५ जेठ - सोनम कपुरको बिहेमा आलिया भट्ट रणवीर कपुरसँग पुगेकी थिइन् । पछिल्लो केही समयअघिदेखि उनीहरूबीच अफेयरको हल्ला चलिरहेको छ । सोनमको बिहेमा सँगै जानुले अफेयरको खबर पुष्टिमा थप बल मिलेको छ । भारतीय मिडियाले आलिया र रणवीर निकै नजिक रहेको उल्लेख गर्ने गरेका छन् । झन् बिहेमा सँगै पुगेपछि त मिडियालाई के चाहियो र ?...
बिहेपछि के–के बदलिन् सोनमले ?
एजेन्सी , ५ जेठ - थर परिवर्तन : केही दिनअघि व्यापारी प्रेमी आनन्द आहजासँग बिहे गरेकी अभिनेत्री सोनम कपुरले बिहेलगत्तै आफ्नो थर बदलेकी छिन् । सोनमले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम सोनम के आहुजा राखेकी छिन् । पतिलाई प्रेम र सम्मान स्वरूप उनले त्यसो गरेको बताइन्छ । हातमा मंगलसुत्र : मंगलसुत्र घाँटीमा नै लगाइने गरिन्छ । तर, सोनमले भने मंगलसुत्र...
सञ्जय दत्तकी छोरी हट अवतारमा
एजेन्सी , ५ जेठ - बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तकी छोरी त्रिशाला दत्त प्रायः आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा हट फोटो सेयर गर्छिन् । भर्खरै उनले केही नयाँ तस्बिर सेयर गरेकी छिन्, यी तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् । ‘आई कान्ट वेट फर समर’ तस्बिरको क्याप्सनमा उनले लेखेकी छिन् । धेरैले उनको सुन्दर शरीरको तारिफ गरेका छन् । त्रिशाला सञ्जय दत्तकी...
श्रीदेवीलाई मरणोपरान्त सम्मान
एजेन्सी , ५ जेठ - फ्रान्सको प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिभलका दौरान बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीलाई मरणोपरान्त सम्मान प्रदान गरिएको छ । तर, सम्मान लिन श्रीदेवीका श्रीमान् र दुई छोरी जाह्नवी र खुसीमध्ये कोही पनि गएनन् । फिल्म मेकर सुभाष घईले यो सम्मान थापेका छन् । श्रीदेवीलाई मंगलबार ‘रिगनाल्ड एफ लुइस फिल्म अनर्स’ बाट सम्मानित गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता,...
सलमानले किस गरेपछि…
एजेन्सी , ५ जेठ - कसको भाग्य कतिवेला पल्टन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । अभिनयमा लामो समयदेखि संघर्षरत मोडल योगिता बिहानीसँग पनि यस्तै भयो । सलमान खानको सो ‘दसका दम’ को प्रोमोमा योगिता उनीसँगै देखिइन् । सलमानले योगितालाई चेक दिएर किस गरेको दृश्य यस प्रोमोमा समावेश छ । यसपछि योगिताको भाग्य खुल्यो । उनलाई एकता कपुरको नयाँ सो ‘दिल हि तो...
दीपेन्द्र सापकोटा/नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ५ जेठ - गायक प्रमोद खरेलको प्रश्न, राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाको जवाफ प्रमोद : पछिल्लो समयमा नेपाली क्रिकेटले जुन सफलता पाइरहेको छ । त्यसमा तपाईंको पनि योगदान छ । त्यसका लागि तपाईंलाई धन्यवाद तथा थप शुभकामना । नेपाली क्रिकेटको पछिल्लो सफलतालाई लिएर कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? जगत : सर्वप्रथम तपाईंलाई धन्यवाद । तपाईंले...
अभिनयलाई निरन्तरता दिन्छु : नम्रता सापकोटा, अभिनेत्री
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं, ५ जेठ - म सानैदेखि फिल्म क्षेत्रमा जोडिएको हुँ । श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, सञ्चिता लुइँटेललगायतको अभिनय रहेको फिल्म ‘मेरो सम्झनामा’मा बालकलाकारको छोटो भूमिका गरेको थिएँ । ‘सिग्नेचर’मा भर्खरकी एक किशोरीको भूमिकामा मैले अभिनय गरेको थिएँ । यतिवेला म स्कुल पढ्दै थिएँ । यो फिल्म अझै रिलिज भएको छैन । मैले जीवनमा यो बन्छु र त्यो बन्छु भनेर कहिल्यै सोचिनँ ।...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं, ५ जेठ - प्रकाश खड्का गन्धर्व नेपाली मौलिक गीत–संगीतमा परिचित नाम हो । तर, उनको फिल्म यात्रा सुरु भएको धेरै भएको छैन । उनले गत वर्ष पहिलोपटक फिचर फिल्म ‘नाका’ खेले । यस फिल्मबाट पाएको सकारात्मक प्रतिक्रियाले उत्साहित बनाएको छ । उनी अभिनित फिल्म ‘हरि’ छिट्टै प्रदर्शनमा आउँदै छ । अहिले भुवन केसीको लगानीमा बन्न लागेको ‘क्याप्टेन’ फिल्मको...
अन्वेषण अधिकारी, काठमाडाैं, ५ जेठ - बाबु जयनन्द मल्लले छोरालाई चाहेको गर्न छुट दिएका थिए । त्यही स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर सिन्धुपाल्चोक चौताराका कृष्ण मल्ल २० वर्ष नपुग्दै कलाक्षेत्रमा होमिए । चार दशकभन्दा लामो समयदेखि उनले कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर नेपाली कलाक्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छन् । रंगमञ्च, रेडियो, टेलिभिजन र फिल्ममा कहिले कलाकार, कहिले निर्माता त कहिले निर्देशकका रूपमा...
एजेन्सी , ५ जेठ - पूर्वी भारतमा एक बालकको छिमेकीको कुकुरसँग विवाह भएको छ । बेहुलालाई जंगली जनावरको आक्रमणबाट बचाउन र दुर्भाग्यबाट जोगाउन उडिसा राज्यको जयपुर जिल्लाको जनजातिको समुदायमा यस्तो विवाह गरिएको हो । विवाहमा एक सय ५० भन्दा बढी मानिस सहभागी थिए । बालकको गिजामा दुई दाह्रा पलाएपछि बालकलाई भविष्यमा हुन सक्ने खराब भाग्यबाट जोगाउने अन्धविश्वासमा सो...
एजेन्सी , ५ जेठ - दक्षिण अमेरिकी राज्य टेनेसा पछिल्लो समयमा एउटा अनमेल विवाहका कारण चर्चामा छ । एक ७२ वर्षीया वृद्धाले १९ वर्षीय युवकसँग विवाह गरेपछि उनीहरू चर्चामा आएका हुन् । दुवैले वास्तविक माया अनुभूति गरेको बताएका छन् । ७२ वर्षीया अलमेन्डा इरेलाले १९ वर्षीय ग्यारी हार्डविकसँगको मायामा पागल भएको बताएकी छिन् । एउटा बर्थडे पार्टीमा उनीहरूबीच भेटघाट...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ५ जेठ - अचेल लन्डनका हरेक स्थानमा प्रिन्स ह्यारी र अभिनेत्री मेगन मार्कलको बिहेको चर्चा हुने गरेको छ । यो विवाह हुन दुई दिन मात्र बाँकी छ । केही ठूला हस्तीहरू यो विवाहमा सामेल हुँदै छन् । जब प्रिन्स ह्यारी र मेगनबीच बिहेको घोषणा भएको थियो, तब मान्छेहरू इन्टरनेटमा मेगनबारे सर्च गर्न थाले । तर, हैरान पार्ने...
खगेन्द्र पन्त/ नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ५ जेठ - म कहिल्यै पनि डबल स्ट्यान्डमा उभिन्नँ । आफ्नो जीवनलाई खुला किताबका रूपमा राख्न चाहन्छु । मैले जानेको, बुझेको कुरा कत्ति पनि नढाँटीकन जनतासम्म जान्छु र राख्छु । जब कि, मैरे पार्टीका केही अग्रज र अरू पार्टीका साथीहरू पनि मलाई ‘राजनीति भनेको त छलढाँट पनि हो, सही कुरा त भन्नै हुन्न जनतामा’ भनेर सिकाउनुहुन्छ ।...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं,५ जेठ - नाटक र फिल्म भिन्न छन् । फिल्म मूलभूत रूपमा धेरै टेक्निकल्ली हुन्छ, तर नाटक त्यतिसारो हुँदैन । एउटै फिल्म वर्षौँसम्म रिपिट गर्दै हेर्न सकिन्छ तर, नाटक लाइभ हुन्छ । यसलाई निश्चित समयसम्म मात्र हेर्न सकिन्छ । फिल्ममा विभिन्न प्राविधिक कुराको प्रयोग गरी चाहेजस्तो रूप, शैली, लय, इफेक्ट इत्यादि दिन सकिन्छ...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ५ जेठ - मेरी आमा हिन्दू र बुबा मुसलमान । इदलगायत चाडमा हजुरआमा, अंकलहरू आउँदा मलाई ‘तिमी त पहाडियाजस्तो देखिन्छौ, मुस्लिमजस्तो छैनौ,’ भन्नुहुन्थ्यो । म फरक थिएँ । त्यो मेरो कमजोरी थिएन । नासिर हुसेन, निर्देशक कसैका आँखा ठूला हुन्छन्, कसैका चिम्सा । कसैको नाक लामो, कसैको थेप्चो । अनुहारको बनोट मिल्दैन । हामी साथीसँग यस्तै विषयलाई लिएर कसैलाई राम्रो...
करिनाको फिल्मलाई एडल्ट सर्टिफिकेट !
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ४ जेठ - छोरा तैमुरलाई जन्म दिएपछि ३७ वर्षीया करिना कपुर पहिलोपटक ठूलो पर्दामा देखिँदै छिन् । फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ’मा करिना सोनम कपुर, स्वारा भास्कर र शिखा ताल्सानियासँगै देखिने भएकी हुन् । फिल्म जुन १ देखि रिलिज हुँदै छ । फिल्मको ट्रेलरमा अपशब्द र दुईअर्थी शब्दहरू अत्याधिक प्रयोग भएकोले सेन्सर बोर्डले फिल्मलाई कस्तो सर्टिफिकेट दिन्छ...
स्वार्थले बाँधिएका तीन बहिनी
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ४ जेठ - मान्छेले आफ्नो स्वार्थका लागि केसम्म गर्छ ? मान्छे कतिसम्म स्वार्थी हुन सक्छ ? यी प्रश्नहरूको सग्लो उत्तर भएर मञ्चन भइरहेको छ, नाटक ‘थ्री सिस्टर’को नेपाली अनुवाद ‘तीन बहिनी’ । शिल्पी थिएटर बत्तीसपुतलीमा मञ्चन भइरहेको नाटक चर्चित रसियन साहित्यकार एन्टोन चेखोबले लेखेका हुन् । यसको नेपाली अनुवाद मेघराज अधिकारीले गरेका छन् । नाटक दिवंगत...
विवाह खर्च काटेर १० लाख शिक्षामा
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ४ जेठ - अमेरिकामा बस्दै आएका विभूषण शाक्य र सिल्भा श्रेष्ठले विवाह खर्च कटाएर १० लाख रुपैयाँ ‘टिच फर नेपाल’ शैक्षिक अभियानलाई सहयोग गरेका छन् । उनीहरूले विवाहमा मितव्ययिता अपनाएर सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियानलाई सहयोग गरेको बताए । दाइजो प्रथा हटे पनि विवाहमा गहनाको बढी प्रयोग गर्ने प्रचलन यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति समर्थन जनाउँदै...
नयाँ दुलहीसँग हिमेश
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ४ जेठ - बलिउड गायक तथा अभिनेता हिमेश रेसमिया बुधबार अबेर राति मुम्बई एअरपोर्टमा नयाँ दुलही सोनिया कपुरसँग देखिएका छन् । खासकुरा के भने विवाहपछि हनिमुनको बहानामा केही जरुरी किनमेल गर्न दुबई गएका उनीहरू त्यहाँबाट स्वदेश फर्किएका हुन् । हिमेशले आफ्नी प्रेमिका सोनियासँग यही मे ११ मा विवाह गरेका थिए । उनको विवाह निकै गुपचुपमा गरिएको...
जेठ १८ मा हरि
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ४ जेठ - फिल्म ‘हरि’ जेठ १८ गतेदेखि प्रदर्शन हुने भएको छ । काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी फिल्मको प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरिएको हो । सधैँ नयाँ भूमिकामा देखिने अभिनेता बिपिन कार्की यस फिल्ममा पनि फरक भूमिकामा देखिने बताइएको छ । यसअघि हरि युनिटले फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिसकेको छ । फिल्मले दर्शकमा कौतुहलता जगाउने विश्वास निर्माणपक्षको छ । फिल्ममा...
करोड क्लबमा सरोजको तेस्रो गीत
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ४ जेठ - गायक सरोज ओलीले गाएको ‘जता जता पिरतीको बाटो’ बोलको गीत करोडभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ । योलगायत उनले गाएका तीनवटा आधुनिक गीत युट्युबमा एक करोडभन्दा धेरैपटक हेरिएका छन् । यसअघि गायक ओलीको ‘तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु’ र ‘माछीले खाने खोलीको लेउ’ बोलका गीत युट्युबमा एक करोडभन्दा धेरैपटक हेरिएका थिए । ‘जता जता पिरतीको...
अल्फाबिटाले उत्कृष्टलाई तयारी कक्षामा छुट दिने
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ४ जेठ - नयाँबानेश्वरस्थित अल्फा बिटाले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई तयारी कक्षामा शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा ११ को मार्कसिटका आधारमा आइइएलटिएस, टोफल र पिटिइएमा ३३ देखि शतप्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । सो संस्थाले तयारी कक्षामा पाँचजनालाई शतप्रतिशत, पाँचजनालाई ७५ प्रतिशत, पाँचजनालाई ५० प्रतिशत र ८५ जनालाई...
जनता जोडिए देश आफैँ जोडिन्छ
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, ४ जेठ - एक दिन विनोबा भावे भएको स्थानमा कलेजका केही विद्यार्थी आए । उनलाई विद्यार्थीको क्षमता जाँच्ने र उनीहरूलाई केही नौलो ज्ञान दिने विचार मनमा आयो । एकछिन सोचेर उनले ती विद्यार्थीलाई कागजका केही टुक्रा दिए । अनि भने, ‘मैले यहाँ कागजका केही टुक्रा जम्मा गरेको छु । अब तिमीहरूले यी टुक्रा जोडेर भारतको नक्सा बनाऊ ।’...
प्रेरक प्रसंग : भिन्न शैलीको काम
नयाँ पत्रिका, ४ जेठ - उहिल्यै कुनै एक स्थानमा एक युवक टाउको निहुराएर आफ्नो काममा पुग्न निकै हतार गरिरहेका थिए । हतार–हतार काममा जाने क्रममा उनले बाटामा एकजना मजदुरले रङ पोतिरहेको देखेर ती युवक टक्क रोकिए । ती मजदुरले रङ पोत्ने क्रममा उनले समय र सामान दुवै बर्बाद पारिरहेका थिए । त्यसरी काम गर्दा एकातिर...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ३ जेठ - असफलतामा परिस्थितिलाई दोष दिनेहरू धेरै भेटिन्छन् । गरिबीका कारण भनेजस्तो पढ्न नपाएको, आर्थिकअभावले सोचेजस्तो लगानी गर्न नपाउँदा मालामाल हुन नसकेको वा देशको सिस्टमका कारण असफलता भोग्नुपरेको गुनासो प्रायः सुन्नमा आउँछन् । निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्किएर पनि इच्छाशक्ति र मिहिनेत गर्ने हो भने जस्तोसुकै सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्, शिव...
म स्कुले छात्राजस्तै ऐश्वर्या
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं,३ जेठ - बलिउड सुन्दरी नायिका ऐश्वर्या राय बच्चनले काम छनोटको मामलामा आफू स्कुले छात्राजस्तै भएको बताएकी छिन् । ‘मलाई लाग्छ कि मभित्र अझ धेरै अनुभव गर्ने उत्साह हुन आवश्यक छ । कामका मामलामा धेरै हदसम्म स्कुले छात्राजस्तै थिएँ,’ कान्स भिडियो कन्फ्रेन्समा बोल्दै उनले भनेकी छिन्, ‘म निर्धारित कार्यक्रमअनुसार कुशलतापूर्वक काम गर्थें ।...
राजीका कारण आलियाको चर्चा
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं,३ जेठ - आलिया भट्ट अहिले प्रदर्शन भइरहेको फिल्म ‘राजी’का कारण चर्चामा छिन् । अभिनय मात्र नभएर कमाइका कारण पनि उनी चर्चामा छिन् । मेघना गुलजार निर्देशित फिल्म ‘राजी’ले ५ दिनमा ५० करोडभन्दा माथिको व्यापार गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । लगभग ३५ करोड लागतमा बनेको फिल्ममा बिक्की कौशल, रजित कपुरलगायत कलाकारले अभिनय...
शाहिदकी श्रीमती २३ वर्षमै दोस्रोपटक गर्भवती
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं,३ जेठ - बलिउड स्टार शाहिद कपुरकी पत्नी मीरा राजपुत गर्भवती भएको खबर शाहिद कपुरले पहिले नै बताइसकेका छन् । तर, सानै उमेरमा दोस्रोपटक आमा बन्न लागेका कारण सामाजिक सञ्जालमा फ्यानहरूले शाहिद दम्पतीको मजाक उडाइरहेका छन् । २३ वर्षकी मीराबाट पहिलो सन्तानका रूपमा छोरी मिशा छिन् । मिशाको तस्बिर शाहिद र मीराले कहिलेकाहीँ...
वसुन्धरालाई लाइफटाइम अवार्ड
नयाँ पत्रिका, काठमाडौ,३ जेठ - छायाछवि क्रियसनले अभिनेत्री वसुन्धरा भुसाललाई छायाछवि लाइफटाइम लिजेन्ड्री अवार्ड प्रदान गर्ने भएको छ । नेपालमा बनेको पहिलो फिल्म आमाबाट अभिनय यात्रा थालेकी भुसाललाई चलचित्र क्षेत्रमा अनवरत सेवा गरेबापत सो सम्मान प्रदान गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी, छायाछविले यसपटक निर्माता, वितरक तथा प्रदर्शक नरेन्द्र महर्जन र अभिनेत्री÷निर्मात्री मौसमी मल्ललाई छायाछवि चलचित्रकर्मी...